Mar dambe ha ku qaldamin hal qalad higgaadinta habka 'Orthodidact'
Posted by Tranquillus | Feb 24, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Dhamaan ficilkaaga qoraalka ah habka loo yaqaan 'Orthodidact'
Ma ogtahay in xirfadaha higgaadinta ay aad u jecel yihiin loo shaqeeyayaasha? Tababarka luuqada Faransiiska ayaa lagama maarmaan u ah kordhinta fursadahaaga shaqo helida. Thanks to habka Orthodidact, waxaad haysataa fursad aad ku hagaajisid xirfadahaaga akhrinta adigoo baranaya dhammaan xeerarka ugu muhiimsan si looga fogaado in qaladaad lagu geliyo email-kaaga. Tayada tani waxay marar badani ka markhaati ka tahay halista shaqaale, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan in lagu daaweeyo deeqdaada iyo kobcinta erayadaada.
Muhiimadda haysashada fiicnaanta ee Faransiiska qoran ee adduunka shaqada
Amarka ugu fiican ee luuqadda Faransiiska maanta waa mawduuc adag oo ku saabsan jawiga xirfadeed. Si loo hagaajiyo hingaadka midkoodna ma aha mid aad u adag sida ay u muuqato. Intaa waxaa dheer, waa hab weyn oo lagugu dhejin karo shirkado badan oo ka shaqeeya dhammaan warshadaha.
Wax kasta oo shaqo ah ee aad codsaneysid, xirfadahaaga luqadeed ayaa isla markiiba kuu kala soocaya musharraxiinta kale. Dhammaan xirfadlayaashu waxay khuseeyaan walaacan codkarka, taas oo inta badan ka tarjumaysa halista ururka. Hal farriin, iyo waa kalsoonida dhammaan astaanta oo qaata waxyeello! Adiga oo tixgelinaya xaqiiqadan, waxaa laga yaabaa in ay xiiso leedahay xirfadaha Faransiiska ee la aqoonsan yahay, gaar ahaan haddii ay tahay afka hooyo.
Nidaamka Orthodidact waa waxbarasho shakhsiyeed
Hadday mid ka mid ah ay tahay mid ku habboon jimicsiga hingaadka, ama uu si caadiya u cambaareynayo si qarsoodi ah xambaarsan ereyo kasta oo adag, arday kasta wuxuu heli doonaa booskiisa Orthodidact. Qof kastaa wuxuu wax ka baran karaa qadarkiisa isagoo aan walwal lahayn. Dhammaantood waxay leeyihiin koorso shaqsiyan ah. Tani waxay u fiican tahay kuwa doonaya inay si joogto ah tababar ugu yeeshaan tababaraha hiddaha.
READ Dhamaadka boostada, qaacidooyinka asluubta leh ee la iska dhaafo
Macalinka waxbarashada ee ka yimaada habka Orthodidact wuxuu dhigayaa tababarkan wax-qabadkiisu uu dhamaystiranyahay si uu ula qabsado dysleksi leh qaababka ugu quruxda badan ee Faransiiska. Waxaa sidoo kale loogu talagalay ardayda wax ka barata ee ku adag in ay qoraal ku hadlaan. Orthodidact waxay bixisaa barnaamij heerkooda ah, si ay u xoojiyaan aqoontooda inta ay kobcinayaan erayadooda iyaga oo leh hal iyo isla foomka.
Fadlan si toos ah ula qabsashada dhibaatooyinka Faransiiska
Marnaba uma baahnid jeegareyn higgaadin ah si aad u ogaatid sida saxda ah loogu dhejiyo ficillo. Natiijooyinka ka soo baxa heshiisyadii hore ee hore iyo isbeddelka kale ee luqaddaada hooyo laguma hayo qarsoodi dheeraad ah. Haddii aad ubaahan tahay higgaadinta iyo hagaajinta naxwaha, Orthodidact waa xalka dhibaatooyinkaaga oo dhan. Waad ku mahadsan tahay barashada fogaanta iyo dhamaystirka, waxaad si fudud u hagaajin kartaa xirfadahaaga akhriska.
Marna kama habsaan in dib loo eego xeerarka aasaasiga ah iyo kuwa farsamo ee naxwaha Faransiiska. Madalku wuxuu ku siinayaa koorsooyin ku saabsan maadooyinka ugu takhasuska badan. Sidaa darteed, waxaad ka helaysaa boodboodyo koorsooyin ah oo aan waligood qalad lagugu sameyn karin, ama xitaa kuwa kale si aad u dejiso otomatik farsameysan Tani waxay kaa hor istaageysaa, mustaqbalka, inaad sameyso khaladaadka guud iyo kuwa soo noqnoqda ee aad waligaa sameysay.
Xoojiyaan eraygiisa luqadda Molière
Ha isku mashquulin inaad barato luuqada Faransiiska ee hadda! Isku day inaad naftaada u baratid, oo aad ku fekereysid fasalo luqadeed oo dhamaystiran si aad u barato sida loola dhaqmo Faransiiska oo leh farshaxan iyo farshaxan. Thanks to tutorials badan si aad u kobciso erayadaada iyo hagaajiso heerka luqaddaada, Orthodidact wuxuu kuu balan qaadayaa horumarka qunyar-socodka ah ee ereygaaga.
READ Sidee loo cadeeyaa qoraalka xirfadlaha ah?
Diyaarso si aad u muujisid naftaada lirikada iyo karisikada maalin kasta xawaaraha hubka! Koorasyada lagu bixiyo bandhigga sidoo kale waa kuwo ku habboon haddii aad rabto inaad bilowdo dib u habeyn lagu sameeyo Faransiis. Ereygani waa maanta caddayn xagga maaliyadda. Barashada ereyada cusub waxay sidoo kale kordhin doontaa aqoontaada ereyada iyo semanticiga. Sidaas awgeed, waxaa laga yaabaa inaan waxba lumin, iyo wax kasta oo lagu helo.
Barashada online-ka ah ee lagu caawinayo qof kasta hagaajinta hingaadkooda.
Habka Orthodidact waa dhab ahaan tababarka internetka. Natiijo ahaan, ma dhici karto in wejiga fool-ka-fool ah. Hadafkeedu waa si kastaba ha ahaatee si lagaaga caawiyo inaad buuxiso dhammaan tarbiyadaada luqadda. Qodobka ugu muhiimsan ee moobiilku waa ilo badan oo dijital ah oo la soo bandhigo. Waxaa jira tababbarro fiidiyoow ah, laakiin sidoo kale koorsooyin qoran. Si loo qiimeeyo xirfadahaaga, su'aalaha xulashada badan iyo kali-taliska ayaa la dhigaa.
Koorasyada Faransiiska ah ee aad awoodi doontid inaad raacdo Orthodidact waa ku filan inay buuxiyaan si aad u gaarto heer aan la aqbalin higaad iyo qoraal is-gaarsiineed. Waxa aad ku dartid xirfad asaasi ah iyo inaad ka fogaato inaadan kor u qaadin si aad u kordhiso CV-gaaga. Wax kasta oo aad heerarkaaga, waxaad ka heli doontaa casharaad loo habeeyay darajadaada. Sidaa darteed qof kasta waa hubaa inuu helo xisaabtiisa, iyada oo aan loo eegin barta bilawga ah.
Suurtagalnimada in lagu taageerayo diyaarintaada tartanka Voltaire
Haddii mashruucaagu yahay inuu ku qeexo xirfadahaaga adigoo ku guuleysta shahaadada Voltaire, ka dibna ha ka waaban. Dibloomadan qiimaha leh wuxuu qiray in aad aqoon u leedahay higgaadinta horumarka iyo naxwaha ee luqadda Faransiiska hodanka ah. Nidaamka Orthodidact ayaa kuu raaci doona oo kaa caawin doona inaad gaarto hadafkaaga haddii aad qorsheyneyso inaad qaadato caqabadan. Waxaa jira runtii barnaamij dhammaystiran oo lagu gudbi karo imtixaankan isla markaana hubi inaad ku guuleysato gacmaha. Naftaada siiso fursadaha ugu fiican ee guusha si aad u xaqiijiso heerka wanaagsan ee Faransiiska iyo inaad noqotid shaqaale ka badan kuwa ku tartamaya.
Ha lumin ilbiriqsi kale, oo ka faa'iideyso fursad aad ku kasbato shahaado halyeey ah si aad u caddeyso naxwahaaga iyo higaadda aqoonta. Shaqaalayntaada waxaa lagu kordhin doonaa oo keliya toban laab. Gabi ahaanba wax lumiya ma lihid, markaa maxaad u tijaabin weyday Habka 'Orthodidact Method' si aad u aragto haddii waxbarashadan masaafada ah ay kugu habboon tahay adiga?
Maya Maya Hal Tiro Hal Xidhan oo Higaad ah Habka Orthodidact Janaayo 18th, 2021Tranquillus
horeKoorsooyinka Lacagaha Ah Iyo Dhammaan Mawduucyada
socdaWarbixinta: 4 Qodobbada Muhiimka ah ee Lagu Ogaado Si Guusha